काउन्टरको रसिद बुक | मझेरी डट कम
लिम्बू भाषी रचना
कुलुङ भाषी रचना
HomSuvedi — Sat, 04/22/2017 - 21:39
यस्ता कर्मचारी थिए उनी जसले जीवनभरि एकै कार्यालयमा, एकै फाँटमा र एकै पदमा निवृत्त हुनु पर्ने नियति बोकेको होस्, जो कसैको चाकरी नगरी, बेइमानी नगरी र सादा जीवनमा जीवनलाई भोगचलन गरिरहेको होस् । जुनसुकै इमान्दार कर्मचारीका अनुहारमा देखिएझैं उनका अनुहारमा पनि दुःखी र निम्छरोपन देखिन्थ्यो । दारी पनि हतपत काट्दैनथे, लुगा पनि मैलाधैला लाउँथे । सधैं हतार हतार गरेर कार्यालयमा जानु पर्दा सफासुघरमा उति वास्ता गर्दैनथे । वास्ता हुन्थ्यो उनलाई समयमा कार्यालयमा पुग्ने । सधैं झैं उनी समयमा कार्यालयमा आइपुग्थे र नयाँ रसिदका केही बुक र ग्राहकको नाम भएका केही ठेली लिएर लाग्थे काउन्टरतिर । अफिसका बाहिर महसुल बुझाउन आएका ग्राहकको घुँइचो लाग्नु अघि नै उनी काउन्टरको टेबुलमा तयारी भएर बस्थे । उनको दैनिकी नै यही थियो । रसिद काट्यो, पैसा लियो, काटिएका रसिदमा उठेको पैसा गन्यो, बेलुका जम्मा गर्यो, साँझ पख केही तरकारीहरू र घरेलु सामान लिएर घर गयो । बस उनको जीवनको गति यही थियो ।
यसरी नेपाल खाने पानी संस्थानको कुनै कार्यालयको काउन्टरमा नै उनको जीवनको पूर्वाद्र्ध थालिएको थियो र केही वर्षदेखि उत्तराद्र्ध शुरु भएको थियो । रसिद काट्ने यही काम गर्दागर्दै वा काट्ताकाट्तै त्यहींबाट निवृत्त हुन लागेका अमुक कर्मचारीलाई यहाँ उनी भनेर सम्बोधन गर्न लागिएको छ । उनको योभन्दा बढी अर्को परिचय अहिले नगरुँ । यसैले यहाँ उनी भन्नाले माथिको बेहोराबमोजिमका कार्यालयका परिधिमा जीवनभरि बुढिएका र अहिले यहाँ चर्चा गर्न लागिएका दामोदर मास्टरसाहेबलाई बुझ्नु पर्छ । तर कार्यकालमा जीवनभरि एकै स्थानमा निवृत्त हुन लागेका कतिपय व्यक्तिहरू अरु पनि हुन सक्लान् । ती सबैलाई उनी र उनीजस्तैको हिसाबमा राखेर वा त्यही भनेर बुझ्न नसकिएला, उहाँ भन्नु पर्ला वा ऊ पनि भन्नु पर्ला । यहाँ भने उनीभन्दा दामोदर मास्टरसाहेबलाई नै बुझ्नुपर्छ । हो, अहिले विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलगाऊँ र यो उनीभित्र दामोदर मास्टरसाहेबलाई नै बुझिराखौं । यति उति भनेर वर्ष नतोकौं, तर उनी निकै वर्षदेखि खाने पानी संस्थानको महसुल बुझ्नका लागि खोलिएको काउन्टरमा रसिद काट्ने फाँटमा रसिद काट्ने काममा लागेका छन्, लागेका छन् । उनको इमानदारिता नै उनलाई एकै ठाउँमा थुप्रिनका लागि अजबको वस्तु बनेको छ । यसै ठाउँमा रहेर काम गर्ने उनीभन्दा अघि अरु पनि धेरै थिए । यो कुरा पिउनले सुनाएको हो उनलाई । पिउनले सुनाए बमोजिम निकै जनाले रसिद काटेका थिए अरे दामोदरकै ठाउँमा बसेर । तर ती कता पुगे कता ! कसैले कुम्लो पारे महिनाभरिको रसिद काटेको पैसा, कसैले दिक्क मानेर शाखा सरुवाको बाटो लिए, कसैले भने लोकसेवा पास गरेर घुस कुम्ल्याउने ठाउँको बाटो तताए । उनले पिउनबाट सुनिएका अरु धेरै कुराहरू पनि थाहा पाएका छन् । थाहा पाएर के भयो र ? दामोदर ता अहिले यसै काउन्टरबाट रिटायर्डको बेलामा पुग्न लागेका न छन् । यहींका यहीं छन् । अब ता रसिद काट्न पनि कम्प्युटरबाट पाइने भो भन्ने उनलाई अलिकति खुसी पनि छ । तर त्यसको सुविधा पाइहालेका छैनन् । सायद त्यो सुविधा पाउने बेलासम्ममा उनी रिटायर्ड भइसक्लान् ।
महसुल बुझाउनेको धुइरो थियो । उनी बडो नियमित रुपमा सबैलाई पङ्क्तिबद्ध भएर नगद भुक्तान गर्न सल्लाह पनि दिन्छन् । अनि काममा लाग्छन् बडो अनुशासनका साथ । हरहिसाब बडो सफासँग राख्छन् । उनमाथि कसैले शङ्का गर्दैन ।
आजको धुइरो केही कम भइसकेको थियो । आज ता पैसा पनि सधैंभन्दा चौगुना उठेको थियो । निकै जनाले पुरानो बक्यौता र फाइनसमेत गरी ठुलो रकम तिरेका थिए । तीन लाख रुप्याभन्दा पनि बढी उठिसकेको थियो । अहिले बैंक दाखिला गर्ने बेला अलिक भइसकेको थिएन । दुई बज्न अँझै केही समय थियो । घुइँचो कम भएको मौका पारेर उनलाई पिउनले चिया ल्याइदियो । अनि बिनाबिथ्थामा गनगनाउन थाल्यो—“तपाईंको इमान्दारिता नै तपाईंको उन्नतिको बाधक बन्यो मास्साप !” चिया खाएको बेला पारेर आज पनि भन्यो पिउनले उनलाई । अस्ति कता हो कुनै दिन पनि यसै भनेको थियो त्यसले दामोदरलाई । तर उनले त्यो कुरा एकातिरबाट सुनेर अर्कातिरबाट उडाइदिएका थिए ।
“तिमीले यही पैसा कुम्ल्याएर चम्पट कस्ने सल्लाह दिएको कि के ? अब के गरौं त ? म पनि चोर्न थालूूँ ? कि कसैको घर फोर्न थालूँ ?” पिउनको कुरा सुनेर आज भने अलिक झोकिएर भने तिनले ।
“आ मैले त्यसो भन्या काँ हो र ? मास्साप पनि !”
“अस्ति कुनै दिन पनि मलाई तिमी यसै भन्थ्यौ । आज पनि यसै भन्दै छौ । होइन यो के भन्या हँ तिमीले ? के मेरो इमान्दारितालाई मैले छाड्नु पर्ने कुरा गर्या हो ? कि यही काउन्टरको जम्मा भएको पैसा लिएर चम्पट कस भनेको हो तिमीले मलाई ? हँ ? के भनेको तिमीले......?” पिउनसँग अँझै झोकिए दामोदर मास्टरसाहेब । यत्तिकैमा बाहिर अर्को ग्राहक पानीको महसुल बुझाउन आयो । उनी लागे रसिद काट्नतिर । पिउन लाग्यो अर्कोतिर । पिउनको प्रतिक्रिया उनले सुन्न भ्याएनन् ।
त्यस ग्राहकले निकै ठूलो रकम तिर्यो । अनि ऊ आफैं गनगन गर्यो— ‘पानी दिन भने सक्या होइनन् चोरहरुले, हावा मात्र पठाउँछन् धारामा । तैपनि तिर्नै पर्यो ..... मेलम्ची भन्छन् चोट्टाहरु, तिनले घुस खाने बाटो ता हो नि.......५ वर्षमा बन्छ भन्थे ५० वर्षमा पनि नबन्ने भो । बनिसक्ता यसबाट पनि पानी होइन हावा मात्र वारपार गर्छ होला ।’ दामोदरले त्यस ग्राहकको गनगन सुनेर पनि नसुनेझैं गरे ।
रसिदको बुक चलाउँदा चलाउँदा यी दामोदरता ता रसिदको प्याड जस्ता मात्र भइसकेका छन् । अँझै अधकट्टी जस्ता मात्र भइसकेका छन् । कुनै प्रतिक्रिया दिन नजान्ने । उनका कानमा यी सबै कुराहरू पस्छन् मात्र । कुनै प्रतिक्रिया उनबाट हुन्न । प्रतिक्रिया के हुनु उनको घरमा पनि पानीको थोपो आउँदैन । खाली बिल बुुझाउनु त छ ! उनी मनमनै सोच्छन् र काममा लागिरहन्छन् । बाहिरको मान्छेको कुराको उत्तर वा कपी गर्न सक्तैनन् यद्यपि उनी कार्बन कपी राखेर रसिदको कपी गर्न भने कहिल्यै पनि बिर्संदैनन् ।
महसुल तिर्ने समय सकियो । पैसा गने, एक्लै । उनी यसै गर्छन् । जोसुकैलाई विश्वासै गर्दैनन् । तर आज के भयो कुन्नि काटिएको रसिदको बिटोमा र पैसामा गन्दा ठ्याक्कै एक हजार तीन सय पचहत्तर रुपियाँ पुगेन । अनि उनी तिलमिलाए । फेरि गने, फेरि गने, अँझै गने । अहँ पैसा पुगेन । के भयो ? कसकोमा छुट्यो । कता गडबड भयो ? कसले पैसा कम दियो ? उनका मनमा अनन्त खुल्दुली चले । टेबुलको ओरिपरि, बसेको कुर्सी मुनि र कोठै भरि छ्यानब्यान गरे । आफ्नो गोजी छामे, चिटचिट पसिना आयो । पैसा नपुगेकै हो । अब के गर्ने ? उनी बडो अप्ठेरो अवस्थामा परे । कम भएपछि ता जिम्मेवारी उनैको हो । उनैले बुझाउनु पर्छ । बढी हुने ता कुरै भएन, कमै मात्र हुन्छ । कहिले सय, दुइसय, कहिले पचास साठी, आज ता हजारभन्दा माथि नै कम हुन गयो । अब के गर्ने ? उनको मनभरि खुल्दुली मचियो । एक गिलास चियाको पैसा पनि उनी अपचलन गर्दैनन् । तर आज यो कसरी भयो ? मनभरि पिरै पिर बोकेर भए जति पैसा जम्मा गर्ने र बाँकी भोलि गोजीवाट जम्मा गर्ने निधोमा पुगे । तर उनको मन सारै बगि्रियो ।
गरुङ्गो मन लिएर उनी अफिसबाट निस्किए । कसैसँग नबोली नजिकको बैंकमा लगेर अपुरो पैसा दाखिला गर्ने काम गरे र नपुग रकम आफ्नो थाप्लामा रहने गरी मिलाए । अघिपछि बडो सजिलैसित उनले यो काम गर्ने गर्थे तर आज उनलाई यो काम गर्न बडो बोझ लागेर आयो । गोजीमा पैसा भए नपुग पैसाको भरपाइ आजै गरिहाल्ने विचारले एकपटक ता खल्ती पनि छामे । खल्तीमा ता साँझ सागसब्जी किनेर लानलाई र बस भाडाका लागि राखिएको चानचुन तीन सय रुप्या मात्र रहेछ । के सकुन् त्यत्रो रुपियाँ भरपाइ गर्न ?
साँझतिर झोलामा केही तरकारी, अलिकति फलहरू र केही खाद्य सामग्री लिएर घर पुगे बडो मलिन मुद्रामा ।
“आज किन ढिलो भयो ?” सोधिन् पत्नीले ।
“हँ........” उत्तर दिन सकेनन् ।
“खै किन किन ।” उनले जवाफ दिन चाहेनन् । अन्यमनष्क भएर उनी लुगा फेर्न लागे । अनुहारभरि चिन्ताका रेखा मात्र देखिए ।
“पानीको बिल आएको थियो । भोलि जाँदा तिर्नुु होला है ।” यसै बेला पत्नीले भनिन् । उनी सुनेको नसुन्यै भए ।
अब भोलिदेखि जान्न अफिससफिस, के जानु, हर्जाना तिर्न, सधैं तिरेको छ तिरेको छ । कति मात्र तिर्ने हँ, उनी आफैंसँग भित्रभित्रै झोकिए । तर अफिस नगए कता जाऊन् त ? के छ र उनको जीविकाको बाटो ? उनले सम्झे— ‘अघि दिउसो उनका पिउनले भनेको जस्तो काम गर्न सकिएनछ । बरु गर्नु नै पो पर्ने रैछ त्यस्तै । बरु त्यही काम गरेको भए पो जीवनमा केही सुख सुविधा पाइन्थ्यो क्यारे । बेर्थै गुजारिएछ जिन्दगी !’ सोच्तै थिए ।
“पिउनले भनेबमोजिको काम अब गर्न थालियो भने पनि पार लगाइएला के त ? सकिएला के त........... ??” एक्लै भुतभुताए ।
“के भनेको तपाईंले ? के भयो तपाईंलाई ? सन्चो छैन कि के हो ? के भुत्भुताइरहनु भएको छ नि....” पत्नीले सोधिन् ।
“काउन्टरको रसिद काट्ताको कुरा गरेको ।” उनेले अन्ठ न सन्ठको कुरा गरे । “कता खस्यो खस्यो ? कि मैले नै फिर्ता दिँदा झुक्किएँ कि ! कि कुनै ग्राहले कम दियो कि ? खै के भयो भयो ?” फेरि पनि एक्लै भुत्भुताए ।
“होइन तपार्इँलाई आज के भयो ?” अलिक डराएर तिनले सोधिन् ।
“नकराऊ तिमी !” अँझ रिसाए ।
“भाइ आयो त पानीको महसुल बुझाउन ?” दामोदरजीको अवस्थालाई अन्यत्र लाने हेतुले उनले प्रसँग फेर्दै सोधिन् । कतै यिनलाई आज सन्चो छैन कि भन्ने भावमा उनको अनुहारतिर हेरिरहिन् । तर दामोदर भने एक्लै केके हो केके बरबराइरहे । पत्नीले उनको बरबराइको कुनै भेउ नै पाइनन् । तर उनले भने फेरि पनि अफ्नो अघिकै एकोहोरो अन्यमनष्कताालाई दोहोर्याइरहे—“अँझ भोलि नहेरी भएन बा, कता के मिस्टेक भएको पो छ कि....., कि त्यही मोरो पिउनले पो मेरा आँखा ता छलेन.......... ??” उनको शङ्का र एक्लै बरबराउने क्रम अँझ गहिरो हुँदै गयो ।
मन छुने रचना
काम भएको छ :)
भूमण्डल पछाडिको यात्रा-२
कविता राम्राे लाग्यो ।
मसँग लाएको माया
छोडे पनि नछोडिने